အိပ်မက်ဆိပ်ကမ်း: Parc De La Villette - 2
Parc De La Villette - 2
ပြန့်ကျဲ ပေါင်းစပ်ခြင်းလေလား...။ အလွှာခြား စုစည်းခြင်းလား...။
Park အများစု၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် အပန်းဖြေနေရာတစ်ခုအဖြစ် အဓိက ရည်ရွယ်တတ်ကြသည်။ သီးသီးသန့်သန့်လည်း ဖြစ်ချင် ဖြစ်မည်။ ရုတ်ရုတ်သဲသဲလည်း ဆူညံနိုင်သည်။ တိုးတိုးတိတ်တိတ် လည်း ဖြစ်နိုင်သေးသည်။ ပန်းဥယျာဉ်ကြီးများလည်း ရှိတတ်သည်။ ကစားကွင်းများလည်း ရှိနိုင်သေးသည်။ ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုခြင်းဆီသည် ရပ်တည်မှုတစ်ခုခြင်းဆီကို ကိုယ်စားပြုတတ်ကြသည် မဟုတ်ပါလား။ သို့ဆိုလျှင် Parc De La Villette သည် မည်သည်ကို ကိုယ်စားပြုပါမည်နည်း။
Bernard Tuschumi ကတော့ တစ်ချိန်တည်း တစ်နေရာတည်းတွင် လုပ်ရပ် (၃) ခုကို သယ်ဆောင်လာသည်။ Event. Place. Movement ဟု Bernard Tuschumi ကဆိုခဲ့သည်။ သမရိုးကျ Park များတွင် တွေ့ရန်ခက်ခဲသော Event များကို စဉ်ဆက်မပြတ် ကျင်းပနိုင်သည်။ သိမ်းဆည်းထားသော အိပ်မက်များနှင့် ကွယ်ဝှက်ထားသော အင်အားတို့ လွင့်လွင့်ပျံ့ပျံ့ ပျံသန်းနိုင်ရန် နေရာတစ်ခုအဖြစ် နှစ်ဆယ့်တစ်ရာစု Urban Park ဖြစ်သော Parc De La Villette က ဖြည့်ဆည်းပေးမည်။ Event, Place နှင့် Movement ကို Bernard Tuschumi က မတူညီသော အရာသုံးခုနှင့် ပေါင်းစပ်၍ ကိုယ်စားပြုခဲ့သည်။ Geometry နည်းအရ Point, Line နှင့် Surface တို့ကို တစ်ခုနှင့်တစ်ခု စနစ်တကျ ထပ်စီ၍ အကန့်အသတ်မဲ့နေရာတစ်ခု (Free Flow Form) တစ်ခုကို ဖန်တီးပေးခဲ့သည်။ "ပြန့်ကျဲမှုသည် ပေါင်းစပ်မှု ဖြစ်သည်၊ အလွှာခြားထားခြင်းသည် စုစည်းခြင်းဖြစ်သည်" ဟု Bernard Tuschumi က ဆိုခဲ့ဟန်တူသည်။
Bernard Tuschumi သည် သူ၏ Point များကို 10x10x10 meter ရှိသော Folly များနှင့် ကိုယ်စားပြုခဲ့သည်။ 120 meter ဆီ ကွာခြားထားသော Land Profile ၏ Grid System တွင် အဆိုပါ Folly များသည် Parc De La Villette အတွက် တစ်ခုတည်းသော ထူးခြားမှု (unique) များဖြစ်သည်။ စင်စစ် Folly များသည် European Garden History & Art တွင် အလွန်အရေးပါခဲ့သော Landscape Element များဖြစ်သည်။ Bernard Tuschumi ပြန်လည်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သော Folly များသည် သမိုင်းအစဉ်အဆက် အသုံးပြုခဲ့သော အလှဆင်ရန် သီးသန့်မဟုတ်၊ လုပ်ဆောင်မှု Function များပါ အတူပါလာသည်။ မတူညီသော Event များအတွက် နေရာလည်း ဖြစ်သည်။ Park တစ်ခုလုံးရှိ Event များကို ချိတ်ဆက်ပေးထားခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ထို Folly များသည် Park တစ်ခုလုံးအတွက် တစ်ခုတည်းသော တည်ငြိမ်နေသည့် Static Element လည်း ဖြစ်သည်။ Parc De La Villette အတွက် တစ်ခုတည်းသော "Deconstructivist Form" လည်း ဖြစ်သည်။ အချို့ Folly များကတော့ မုန့်ပဲသရေစာနှင့် သကြားလုံးစသည်တို့ကို ရောင်းသည့်ဆိုင်များ၊ ခေတ္တခဏ အနားယူနိုင်သည့်နေရာများ ဖြစ်သည်။
Line များကို Bernard Tuschumi က မတူညီသော Folly များအား ချိတ်ဆက်ပေးသည့် လမ်းများအဖြစ် ခေါ်ဆောင်လာသည်။ အချို့လမ်းများသည် မတူညီသော Folly များအတွက် ဆုံမှတ်များ ဖြစ်စေသည်။ အထင်ရှားဆုံးလမ်းနှစ်ခုမှာ မြောက်နှင့်တောင်ကို Metro Station နှစ်ခုနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးထားသောလမ်းနှင့် Paris မြို့တော်ကြီးနှင့် မြို့ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်များကို ချိတ်ဆက်ပေးထားသော အရှေ့နှင့်အနောက် သွယ်တန်းနေသောလမ်း ဖြစ်သည်။ Bernard Tuschumi ၏ Line များသည် Parc De La Villette အတွက် ပင်မနောက်ခံကျောရိုးတစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။ Park visitorများကို မြေပုံအညွှန်း အလွယ်တကူ ဖတ်နိုင်စေရန်နှင့် ထိုသူတို့၏ မှတ်ဥာဏ်အတွင်း PDLV ၏ အခြေခံဖွဲ့စည်းမှုပုံစံကို လျှင်မြန်စွာ မှတ်သားမိစေသည်။ အထက်မှပုံသည် Ourcq canal တစ်လျှောက် ဖောက်လုပ်ထားသော လမ်းဖြစ်သည်။
အထက်ပါပုံကိုကြည့်လျှင် "Sine Wave" နှင့် "Straight Line" များကို ပေါင်းစပ်ထားသော Walkway ကို မြင်တွေ့နိုင်သည်။
"Curve Walkway" သည် Park တစ်ခုလုံးကို ဖြန့်ကျက်ထားပြီး Folly အများစုနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးထားသည်။
Parc De La Villette အတွက် Bernard Tuschumi ဖန်တီးခဲ့သော Surface များသည် Activity နှင့် Event တို့အတွက် နေရာများဖြစ်သည်။ ထိုနေရာများတွင် ဂိမ်းကစားနိုင်သည်၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နိုင်သည်၊ အနားယူအပန်းဖြေရန် Entertainment နေရာများရှိမည်။ မတူညီသော Sufrace များနှင့် မတူညီသော ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ဖန်တီးမှုများအကြားတွင် အချို့ Sufrace များကတော့ သဘာဝအတိုင်းလည်း တည်ရှိနေတတ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် Parc De La Villette ၏ နေရာတိုင်းသည် လှုပ်ရှားသက်ဝင်ခြင်းမဟုတ်၊ ဆိတ်ငြိမ် အေးချမ်းခြင်းများလည်းရှိသည်။ Bernard Tuschumi ဖန်တီးပေးခဲ့သော Suface အများစုသည် Geometric Form များဖြစ်နေတတ်သည်။
အထက်ပါပုံတွင် မတူညီ Function များနှင့် မတူညီသော Folly များကို တွေ့နိုင်သည်။
Bernard Tuschumi သည် Parc De La Villette တွင် Post Mordenism ၏ Deconstructionism ကို သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ လွတ်လပ်မှုကို တောင့်တနေသော လူမှုအဖွဲ့အစည်းအတွက် Free Flow Form တစ်ခုကို စနစ်တကျ သယ်ဆောင်လာသည်။ Design တစ်ခု ဖန်တီးခြင်းသည် Solution ဟုဆိုသော အဖြေတစ်ခုရှာခြင်းဟုဆိုလျှင် Bernard Tuschumi အတွက် အဖြေသည် Organization တစ်ခုကို စနစ်တကျ ထပ်စီ၍ လိုအပ်သည်များကို ဆွဲထုတ်အသုံးပြုခြင်း ဖြစ်ပေမည်။ သူ၏ Deconstructionist element သည် Deconstructivism ၏ သဘောသဘာဝကိုသာမက history element တို့ကို ပြန်လည် မိတ်ဆက်ပေးခြင်းကိုပါ တွေ့ရပေမည်။ သူ၏ စိတ်ကူးစိတ်သန်းနှင့် ဖန်တီးလိုမှုများကို မိတ်ဆက်စဉ်က သူ့၏ ဒီဇိုင်းသည် ထိုအချိန် ထိုခေတ်ကာလကို ထင်ဟပ်ပြနေသည်ဟူသော၊ တစ်နည်းအားဖြင့် ငိုကြွေးနေသော Paris လူမှုအဖွဲ့အစည်း၏ တောင့်တမှုသရုပ်ကို ထင်ဟင်ပြနေသည့် (reflecting the cry of the social political era) ဟူသော ဝေဖန်မှုများလည်း ရရှိခဲ့သည်။
သို့ဆိုလျှင် Parc De La Villette သည် ခေတ်သစ် Urban Park များအတွက် မည်သည့် အရာများကို ခေါ်ဆောင်လာခဲ့သနည်း။ မည်သည့်ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုးများကို ရရှိစေခဲ့သနည်း။ မည်သည့် ဝေဖန်ချက်များကို ခံယူခဲ့သနည်း။ အချို့သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများတွင် Parc De La Villette သည် လေ့လာအပ်သော ဒီဇိုင်းတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့သည်။ အချို့လေ့လာမှုများတွင် Parc De La Villette သည် World Worst Park များတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ အဖြေသိသော မေးခွန်းများစွာနှင့် အဖြေမရှိသေးသော မေးခွန်းများစွာ Paris မြို့တစ်နေရာတွင် ရှိနေခဲ့လေပြီ။
Landscape Design သည် ကျွန်တော်နှင့် မကျွမ်းဝင်သော၊ အပြည့်အ၀ မရင်းနှီးသော ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရှေ့ဆက်ပြီးလည်း နက်နက်နဲနဲ ဆက်လက်လေ့လာဖို့ လတ်တလော စိတ်ကူးမရှိ။ ထို့အတူ ကျွန်တော်ဖတ်မိ နားလည်မိ ရေးသားမိသော Parc De La Villette တွင်လည်း လိုအပ်ချက်များ၊ လွဲချော်နေမှုများ ရှိကောင်းရှိမည်။ သို့သော်လည်း Parc De La Villette ကို ကျွန်တော် စိတ်ဝင်စားသည်။ သူ့အပေါ်တွင် ဖြန့်ကျက်တွေးမိသော ကျွန်တော့် စိတ်ကူးအတွေးများကိုလည်း နှစ်လိုစွာ မှတ်သားလိုသည်။ အကယ်၍ ကျွန်တော့်ပို့စ်တွင် တစ်စုံတစ်ခု အမှားအယွင်းများပါခဲ့လျှင် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရုံ ၀မ်းနည်းမိရုံမှလွဲ၍ ကျွန်တော် မည်သို့မျှ တတ်နိုင်မည်မဟုတ်။ နောက်ဆုံး ပို့စ်တွင်တော့ ကျွန်တော် လက်ခံမိသော သဘောတရားများနှင့် နှိုင်းယှဉ်မိသော အတွေးများကို စနစ်တကျ မှတ်သားလိုသေးသည်။ မည်သို့ဆိုစေ Parc De La Villette ကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သော၊ သင်ကြားရေး၊ အလုပ်နှင့် မည်သို့မျှ မသက်ဆိုင်ပါပဲ ကျွန်တော်သိလိုသောအချက်များကို စနစ်တကျ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးသော Phyllis (Yang Pih Foon) ကို ကျေးဇူးတင်သည်။
Parc De La Villette3